Madaxweyne Farmaajo oo Safar aan la Shaacin ku tagay Eritrea (Daawo Sawiradda) – Xeernews24
Madaxweyne Farmaajo oo Safar aan la Shaacin ku tagay Eritrea (Daawo Sawiradda)
24. April 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta gaadhey magaaladda Asmara ee caasimadda dalka Eritrea, kadib markii uu ka soo qeyb galay shir ka dhacay shalay magaaladda Qaahir ee dalka Masar oo looga hadlay dhibaatooyinka ka taagan dalalka Suudaan iyo Libya.
Wasiirka warfaafinta Eritrea Yemane Meskel ayaa sheegay in Madaxweyne Farmaajo oo ay wehlinayaan wasiirka waxbarashada iyo saraakiil kale uu ku soo dhaweeyay Garoonka Madaxweynaha dalkaasi Isaias Afwerki.
Labada Madaxweyne ayaa kulan ku leh xarunta Madaxtooyadda magaaladda Asmara, waxaana la sheegay in ay ka wada hadlayaan xidhiidhka Soomaaliya iyo Eritrea iyo isbedellada ka socda gobolka Geeska Africa.
Waa safarkii labaad oo Madaxweyne Farmaajo ku tago dalka Eritrea tan iyo bishii July ee sannadkii tagey, xilligaasi oo si rasmi ah dib loogu soo nooleeyay xidhiidhka labada dal oo sidoo kale ku heshiiyay in ay safaaradahooda dib uga furtaan Asmara iyo Muqdisho.
Madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki ayaa 4 bilood kadib booqashadii Farmaajo ee Asmara ku yimid Muqdisho si uu u xoojiyo cilaaqaadka dib loo cusbooneysiiyay ee dalkiisa iyo Soomaaliya.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/04/Casmara.jpg 799 1199 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-04-24 12:16:372019-04-24 12:16:37Madaxweyne Farmaajo oo Safar aan la Shaacin ku tagay Eritrea (Daawo Sawiradda)
Daawo:Wasiirka Maaliyadda Jabuuti oo ka warbixyey xaalada Caafimaad ee dhaqaalaha... GO’AAN GORGOR (Decision of Eagle)